March 2011 | အ င်္လ ကာ ည
11:46 AM | Labels: ဆောင်းပါး
တစ်နေ့ ကျနေ်ာ ရုံးက ကိစ္စနဲ့ တာမွေအ၀ိုင်းဘက်ကို ရောက်ပါတယ်……….ရောက်တော့ ခံတွင်းက ချဉ်လာလို့
ဆေးလိပ်သောက်မယ်ဆိုပြီး ဈေးဆိုင်ကိုသွားဝယ်တယ်… ပြီးတော့ ဆေးလိပ်ကို ..မီးညှိ ရှုရှိုက်နေတုန်း…
ဘေးနားမှာက စာအုပ်စာရွက်အဟောင်းဆိုင်လေးပေါ့…………အဲ့ဒီမှာ CV Form
ဘယ်အချိန်ကတည်းက လာရောင်းထားလည်းမသိဘူး………..ကျနော်ကလည်း ကျနော်ပဲလေ အငြိမ်မနေပဲ ပါးစပ်
ဦးလေးရေ CV Form တွေက
မြန်မာပြည်မှာ အလုပ်အကိုင် Agency တွေကတော်တော်များများရှိပါတယ်………. အောင်မြင်တဲ့ Agency
အဲ့ဒီမှာ အလုပ်သွားလျောက်တဲ့သူတွေကလည်းတစ်နေ့ကို ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ…
CV Form တစ်စုံဆိုရင် တော်တော်လေးကို ထူမယ်ထင်တယ်နော် ..စဉ်းစားကြည့်ကြပါဦး။။။ အပေါ်ဆုံးမှာ CV
က တစ်ရွက် ကျောင်းထောက်ခံချက်၊ ပညာရေးမိတ္တူ.
မရှိရင်တောင် အနည်းဆုံး(၄)ရွက်မကရှိမှ CV Form တစ်စုံကပြည့်စုံမှာကို။အလုပ်ရတာလည်းရှိမယ်
မရတော့ အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ CV Form တွေကို သူတို့က ဘာလုပ်မယ်ထင်လဲ………. ကျနေ်ာတော့မသိဘူး
အခုလောလောဆယ်တော့. လမ်းဘေးကုလားဆိုင်မှာ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ကိုးရို့ကားယားတွေဖြစ်နေတော့တာပဲ..
နောက်ပြီးရှိသေးတယ်…………တစ်ချို့ Agency ကို အလုပ်အကိုင်ရရင် ပထမတစ်လကို 50% နဲ့ဒုတိယ တစ်လကို 25%
ပေးရသေးတဲ့အပြင် အလုပ်ရပြီး တစ်လအတွင်း အလုပ်.လုပ်ရတာ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် သူတို့ထပ်ရှာပေးမယ်ဆိုပြီး
အဆင်မပြေတဲ့သူကိုပြန်ရှာပေးတာထက်စာရင်.. Agency တွေက နောက်လူသစ်တွေကိုပဲ
ဦးစားပေးရှာပေးပါတယ် …ဒါမှလည်း သူတို့အတွက် 75% အပြည့်ရမှာလေ.
9:27 AM | Labels: ကိုယ်ပိုင်အတွေးအမြင်
ငွေရှိတဲ့လူလဲ ရှိတဲ.မာနရှိသလို ၊ မရှိတဲ.လူလဲ မရှိတဲ့မာနတော.ရှိပါတယ်။
8:28 AM | Labels: ဆောင်းပါး
တစ်ခါတစ်ခါ တိုးဝှေ့လာတဲ့လေက ကျွန်တော့်ဆံပင်တွေကို ဖွကျဲသွားကြတယ်။ နေစောင်းသွားပြီဖြစ်လို့ပြန်ဖို့ ကျွန်တော် ထလိုက်မယ်အလုပ်မှာ လူတစ်ယောက် ကျွန်တော့်ရှေ့ လာရပ်တယ်ဗျ။ မော်ကြည့်လိုက်တော့ ကြည်လင်သန့်ရှင်းတဲ့ သူ့ မျက်နှာမှာ ပြုံးယောင်သမ်းနေတယ်။ သူ့ အသက်က ခြောက်ဆယ်ဝန်းကျင်လောက် ရှိရော့မယ်။
သူက ကျွန်တော့်ကို . . .
ကျွန်တော်က သူ့ကို ငေးကြည့်တယ်။ သူ့ကို အံ့သြတာလည်း ပါတာပေါ့၊ သူက ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်နေတာတွေကို သိနေတဲ့ အမူအရာမျိုးနဲ့လူ့လောကမှာ ပြသနာတွေ ရှိတာပေါ့၊ လူတစ်ယောက်က မိုးရွာထဲမှာ ထီးဆောင်းပြီးသွားရင်း တွေးမိတယ်ဆိုပဲ၊ မိုးဟာ အပေါ်က ရွာပေလို့သာပဲ၊ အောက်ကများရွာရင် ဘယ်လို ထီးဆောင်းသွားရပါ့မလဲလို့။ ဒီအတွေးနဲ့ သူ့မှာ အောက်က ရွာမယ့်မိုးကို ထီးဆောင်းရေး ပြသနာကြီးဖြစ်နေတယ်။ ဒါ တကယ်တော့ ပြသနာမှ မဟုတ်တာ ပြသနာ မဟုတ်တာကို ပြသနာလုပ်နေရင် ကိုယ်ပင်ပန်း စိတ်ပင်ပန်း ဖြစ်ရတတ်တာပဲ။ လူတွေဟာ ပြသနာအတုကို ပြသနာအစစ်ထင်ပြီး ပင်ပင်ပန်းပန်း ဖြေရှင်းနေတတ်ကြတယ်။
ဒီမယ် မောင်ရင် ပြသနာမဟုတ်တာကို ပြသနာမဟုတ်ဘူးလို့သိရင် ပြသနာဟာ ပြေလည်သွားတာပဲ။
တစ်ခါတုန်းက ဖားပြုတ်တစ်ကောင်က ကင်းခြေများတစ်ကောင်ကို ကြည့်ပြီး ပြသနာဖြစ်နေတယ်တဲ့ မောင်ရင်ရဲ့၊ ကင်းခြေများရဲ့ ခြေထောက်တွေက သိပ်များတာပဲ။ ခြေတွေ သိပ်များတော့ သွားရင် ဘယ်ခြေထောက်ကစပြီး လှမ်းပါလိမ့်လို့ တွေးရင်း ဖားပြုတ်မှာ ပြသနာ အကြီးအကျယ် ဖြစ်နေတယ်။
ဒီလို ပြသနာဖြစ်ပြီး သူကိုယ်တိုင်တောင် ဘယ်လိုစ လှမ်းရ ခုန်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေတယ်တဲ့ မောင်ရင်ရဲ့ ။
ပြသနာ မဟုတ်တာကို ပြသနာလုပ်နေတော့ လှမ်းလို့ရပါလျက်နဲ့ မလှမ်းမိ ၊ ခုန်လို့ရပါလျက်နဲ့ မခုန်မိနဲ့ လိုရာကို မရောက်တော့ဘူးပေါ့။
ပြသနာတစ်ခုဟာ စစ်မှန်တဲ့ ပြသနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ ရှောင်နေလို့လဲ မရဘူး။ ဖြေရှင်းပစ်ရမှာပဲ၊ ပြသနာဆိုတာ ဖြေရှင်းရမယ့် အရာဆိုတော့ ဖြေရှင်းလိုက်ပေါ့ မောင်ရင်။
8:04 AM | Labels: ဆောင်းပါး
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာအ၀တ်လှန်းဖို့အိမ်ရှေ့ကိုအထွက်သူ့ခြံထဲမှာမုတ်ဆိတ်ဖားဖားကြီးနဲ့ အဘိုးကြီးသုံးယောက် ထိုင်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါသတဲ့။
အမျိုးသမီးက ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းမသိပေမယ့် သက်ကြီးရွယ်အိုတွေဖြစ်နေတာမို့လို့ဂါရ၀တရားလေးနဲ့
"အဘတို့ကို ဘယ်သူဘယ်ဝါတွေမှန်း အတိအကျမသိပေမယ့် မြင်ဖူးသလိုပါပဲ။ အမောပြေ ၀င်နားနေကြတယ် ထင်ပါရဲ့။ အိမ်ထဲဝင်ပြီး အကြမ်းလေးသောက်၊ လက်ဖက်လေး မြုံ့ကြပါဦးလား" ရှင်လို့လောကွတ်ပြုရှာပါသတဲ့။
အဘိုးတွေက ချက်ချင်းဆိုသလို သူမကိုပြန်မေးပါတယ်။ "ကလေးမရဲ့အိမ်သား မရှိဘူးလားကွယ့်…."
"ဒါဆိုရင်တော့တို့များဝင်လို့ဘယ်တင့် တယ်မလဲကွယ်" လို့
ဒီလိုနဲ့နေစောင်းလို့ခင်ပွန်းသည်ရောက်လာတော့ အမျိုးသမီးက အကျိုးအကြောင်း ပြန်လည်ပြောပြတဲ့အခါ `သွားပြီး ဖိတ်ခေါ်လိုက်ချေကွာ။ အဘိုးတွေသနားပါတယ်။ အိမ်ထဲကိုကြွကြပါ´လို့ ခင်ပွန်းကပြောခိုင်းသတဲ့။
အမျိုးသမီးလည်းချက်ချင်းဆိုသလို အပြင်မှာရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ အဘိုးအိုသုံးဦးကို အိမ်ထဲကြွဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါသတဲ့။ အဲဒီအခါမှာ `တို့သုံးယောက်လုံးတော့ ၀င်လို့မရဘူး ကလေးမရဲ့။ တစ်ဦးပဲရမယ်ကွဲ့။
တစ်ဦးအမည်က ဘဓန တဲ့၊
ဟောတစ်ယောက်ကတော့ ဘမေတ္တာ တဲ့။
ဘယ်သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်လဲ??? ကလေးမရဲ့ခင်ပွန်းနဲ့ သွားပြီးတိုင်ပင်ချေဦးလေကွယ်´လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
အဲတော့ အမျိုးသမီးဟာ ခင်ပွန်းသည် ကိုတိုင်ပင်တော့ သူက
` ဟာ လိုနေတာ တို့အမြဲတမ်းတမ်းတနေတာဓနဥစ္စာမလား။ အဲတော့ ဘဓန ပဲဖိတ်ခေါ်ချေကွာ´လို့ပြောတော့ ဇနီးသည်က `ရှင်ကလဲ အောင်မြင်မှုတွေသာ ပိုလိုအပ်တာမလား။ အဲတော့ ဘအောင်လံကိုပဲ ဦးစားပေး ဖိတ်ခေါ်သင့်လှတယ်လေ´လို့ ပြန်ပြောကြရင်းစကားအချေအတင်ဖြစ်နေခိုက်မှာ အိမ်ခန်းထောင့်မှာ နေနေတဲ့ ချွေးမချောက` အဖေနဲ့အမေတို့ရယ် တကယ်တော့ ဘမေတ္တာ ကိုသာပိုဖိတ်ခေါ်သင့်တာပေါ့။ အိမ်မှာ အေးချမ်းမှုရစေအောင်ပေါ့´လို့ ပြောပြရှာပါသတဲ့။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ယောက္ခထီးလုပ်သူခင်ပွန်းသည်က
`အေး ငါ့သမီးပြောတာလည်းဟုတ်တုတ်တုတ်ပဲ ရှင်မရ။ အဲတော့ ဘမေတ္တာကိုပဲ ဖိတ်ချေတော့ကွာ´ လို့ အတည်ပြုပြောလိုက်ပါသတဲ့လေ။
ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ အမျိုးသမီးဟာ ဘဘိုးအိုသုံးဦးဆီ အရောက်သွားပြီး `အဘိုးတို့ထဲက ဘမေတ္တာဆို
တဲ့ အဘကဘယ်သူများပါလဲရှင်။ သူ့ကိုပဲဖိတ်ခေါ်ပါတော့မယ်´လို့လည်းပြောလိုက်ရော ဘမေတ္တာ ဘိုးဘိုးက
အိမ်အ၀၀င်ဖို့ခြေလှမ်းပြင်ခိုက်မှာ ကျန်အဘိုးနှစ်ဦးလဲ တစ်ပါတည်းလိုက်ဖို့ ဟန်ပြင်ကြပါတော့တယ်တဲ့လေ။
အမျိုးသမီးက `ကျွန်မက ဘမေတ္တာတစ်ဦးတည်းကိုပဲ ဖိတ်တာပါရှင်။ စောစောကဘိုးဘိုးတို့ပြောတော့
သုံးဦးလုံး ၀င်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆို´ လို့အံ့အားသင့်စွာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီအခါမှာ အဘိုးသုံးဦးလုံးကသံပြိုင်ဆိုသလိုပါပဲ အခုလိုပြောလိုက်ပါတော့တယ်။
`အေး …. ခလေးမက ဘဓနပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘအောင်လံပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျန်နှစ်ယောက်က
အပြင်မှာနေခဲ့မလို့ပဲကွဲ့။ ခုတော့ … ခလေးမတို့မိသားစုက ဘမေတ္တာကိုဖိတ်တော့ သုံးဦးစလုံးလိုက်ရတာပေါ့
ကွယ်။ မှတ်ထား ကလေးမ …
ဘယ်တော့မဆို မေတ္တာသာရှိနေမယ်ဆို ဓနရော၊ အောင်လံပါ ရှိနေမယ်ဆိုတာ
တစ်သက်စာ မှတ်သားကြပေတော့ကွယ်´တဲ့။ ။
ကဲ … ပုံပြင်လေးထဲကအတိုင်း ကျွန်တော်တို့တွေလဲတစ်ဦးပေါ်တစ်ဦး မေတ္တာထားကာ၊ သတ္တ၀ါ အားလုံး
အပေါ်လဲ မေတ္တာပွားကာ အေးချမ်းလှသောဘ၀ကိုတည်ထောက်ကြပါစို့လား။ ။
(၂၈ ၊ ၂ ၊ ၂၀၀၀ နေ့ထုတ် အလင်းတန်းဂျာနယ်ကို မှီငြမ်းကိုးကားကာ တင်ပြပါသည်)
10:03 AM | Labels: ဆောင်းပါး
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ပြောချင်တာက လွယ်လွယ်ကူကူရတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယ် ထိုးသတ်ဖို့ လက်နက် မဖန်ဆင်းမိပါစေနဲ့။ နှုတ်ကြောင့်သေ လက်ကြောင့်ကြေ ဆိုတဲ့ စကားပေါ်ထွက်လာတာ လွယ်လွယ်ကူကူတော့ ပေါ်ထွက်လာတာတော့ မဟုတ်ဘူးဗျနော်။ ဒါကြောင့် အတတ်နိုင်ဆုံး နှုတ်စောင့်စည်းကြပါလို့။ မိမိလုပ်နိုင်တာကိုပဲ သစ္စာ ဆိုမိပါစေ။ မလုပ်နိုင်မှန်းလဲ သိရက်သားနဲ့ ပြီးပြီးရောဟာ ဆိုပြီး မလုပ်မိပါစေနဲ့။ သစ္စာစူးတယ်ဆိုတာ အရိုးစူးသလို အပ်စူးသလိုတော့ စူးခနဲ နာတာမဟုတ်လောက်ဘူး။ များများရရင် များများပြန်ပေးရတတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို လက်ခံထားတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ သစ္စာဆိုတာ …………??????